Ọnye na-bụ Engin Arık? | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌnye na-bụ Engin Arık?
Onye bu arik
Engin Arık (14 Ọktoba 1948 - 30 Nọvemba 2007) bụ onye na - ahụ maka ihe ọmụmụ Turkey na onye bụbu prọfesọ nke Ngalaba Nyocha na Mahadum Boğaziçi. A mara ya maka echiche ya na ogbunigwe Thorium nwere ike ịbụ ihe dị ọcha na nke akụ na ụba na nsogbu nke ike.
A mụrụ ya na Ọktọba 14, 1948 na Istanbul. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Atatürk Girls High School na 1965. Mgbe Arık natasịrị diplọma ya na mgbakọ na mwepụ na physic na Mahadum Istanbul na 1969, ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka onye na-enyere ụmụ akwụkwọ aka na oche Theoretical Physics oche nke otu mahadum ahụ.
Engin Arık nwetara nzere nna ya ukwu (MSc) na 1971 site na Mahadum Pittsburgh n'ọhịa nke nnwale ahụ ike dị elu (PhD) na 1976. Isi okwu nke omumu ihe omumu nke PhD ya bu ihe nlere anya choputara site na iziga okpu hyperon n’elu ihe di iche. Dịka onye na-eme nchọpụta post-doctoral site na 1976-1979, o sonyere na nyocha nke na-enyocha usoro dị iche iche nke osisi bekee zigara ebumnuche hydrogen na Mahadum London na Rutherford Laboratories.
Na 1979, ọ laghachiri Turkey banye na Ngalaba Mmụta Mmụta Ahụ Mahadum nke Bogazici. Ọ ghọrọ onye prọfesọ na-akpakọrịta na 1981 na ọmụmụ ya na ngalaba nke nnwale nnwale ahụ ike dị elu. Na 1983, ọ hapụrụ mahadum ahụ wee rụọ ọrụ na Control Data Corporation afọ abụọ wee laghachi Mahadum Boğaziçi wee bụrụ prọfesọ na 1988.
N’agbata afọ 1997 na afọ 2000, Arık rụrụ ọrụ dị ka onye ọrụ radionuclide na Comprehensive Test Ban Treaty Organisation, ụlọ ọrụ nke United Nations na Vienna.
Mgbe 1990 gasị, ọ sonyere n'ọmụmụ ihe na CERN. O duuru ndi sayensi Turkey nke sonyere na nyocha nke ATLAS na CAST. Arık ebipụtala ihe karịrị otu narị edemede na ngalaba nyocha gbasara ume dị elu wee nata narị narị okwu. Arık, onye bụkwa onye ntụzi aka nke Turkish National Accelerator Project, nwụrụ n'ihe mberede ụgbọelu na Isparta na 30 November 2007. E liri ya n’ili Edirnekapı Martyr.
Arık lụrụ Prọfesọ Metin Arık, onye bụ prọfesọ na Mahadum Boğaziçi n'otu ngalaba ahụ, nwee ụmụ abụọ.
Emi odude ke h-index dabere na ogo Webometrics akụkọ bipụtara na 2014, ka nọ n'ọnọdụ mbụ nke ndị ọkà mmụta sayensị na Turkey.
Naanị nnwale ahụ siri ike physics na-ejedebeghị n'ọrụ ya n'ọhịa Arik, nsogbu nke ike nke thorium m hụrụ ihe ndị dị mkpa na Turkey dị ọcha ma achọpụtala na usoro akụ na ụba nwere ike ịbụ na ọhụụ ahụ na ọrụ ya kwesịrị ịdị. N'akụkụ a, ogwu nke Turkey ma nweta ikike imepụta ọkụ eletrik mgbe ọtụtụ ijeri agbapụta tụrụ aro ga-abụ isi iyi nke ike. Mkpoko nke CERN na ndi otu Turkey n’ihi oru ya n’ogbugbu ndi mmadu, eweputara ugbo elu ahu site na Mossad ma obu ndi ulo oru ndi ozo choro belata ya.
Egwuregwu Ngwá Ọrụ nke 1.si Engin Öner
Mgbochi nke CHP na-ebu ọrụ a na-arụ na Asiyan Park na nchịkọta nke nzuko omeiwu
Mee ka ndị Eskişehir nweta ozi ọma
Deputy Prime Minister Bülent Arınç na nwunye ya Münevver Arınç,
Hasnye nyere aka n’ichepụta ụgbọ ala ụlọ?
Ọnye na-bụ Vecihi Hürkuş?
New Marmaray Line Project kwụsịrị (New Marmaray IETT Lines)
Izsel tiles na Marmaray kwụsịrị
Marmaray na-akwụsị ala ụgbọelu na ụgwọ ụlọ
Mgbawa bombu na Metro, Metrobus na Marmaray akwụsị
A ga-agụ 7 Güzel Adam na Marmaray na ebe a na-akwụsị ya
Marmaray Asọm aka: 30 ụlọ ọrụ mere Marmaray
Kọmitii Na-ahụ Maka Ógbè Marmaray na-azọrọ na Marmaray nwuba
Snow na-esi ísì mmiri na-akwụsị
Mgbe ị ga-amalite Malatya High Speed ​​Train Project
3. arụ ọrụ ụgbọ elu ga-amalite mgbe
Njikọ Njikọ European Side na Isi Obodo
Anwụrụ Anwụolulu Nkwụsị Mpụ na Map Map
Ụzọ ụgbọ oloko ọhụrụ nke European emeela ka ọnụ ahịa akụ na ụba baawanye n'ógbè ahụ
E gburu Marmaray n'akụkụ Europe
Nkwupụta Okike: Anatolian-European Side Integrated Rail System Survey Project consultancy…
Nhọrọ nke uzo Anatolian-European Side Integrated Rail Sistem Survey project ..
Anatolian - European Side Integrated Rail System Surveying Project na Nkwupụta…
Anadolu - European Side Integrated Rail System Project Inyocha na inyocha…
Akụkụ Europe nke Istanbul Na-enweta Nsuso 4 Nlekọta Ọhụụ Ọhụrụ
Nnukwu ọrụ weghaara akụkụ Europe! Ọnụ ahịa ụlọ ndị dị na mpaghara ahụ abawanyela okpukpu abụọ
YHT agafewo n'akụkụ Europe maka oge mbụ
Oge Ihe Njiri Metrobus na Oge Njikwa
Tchat Gratuit gbara Rencontre Serieuse
Ọnye na-bụ Süleyman Reyhan?
Ọnye na-bụ Gazi Yaşargil?
Ọnye na-bụ Ekrem İmamoğlu?